त्यसपछि चाहिँ मनमा चिसो पस्यो र चाइनामा फैलिरहेको यो रोगले सीमापार गर्न सक्ने संकेतसमेत बुझियो । कोरियाको कार्यक्रम भव्य भयो । फर्केर हङकङको कार्यक्रम गर्नुपर्ने । मनमा डर पैदा भयो । डर २ वटा थियो । एक कार्यक्रम स्थगित हुने हो कि ! अर्को हामीलाई पनि केही हुने हो कि ! पुरा पढ्नुहोस्
मनोज पण्डित -फिल्म समीक्षक/निर्देशक, फाल्गुन १४, २०७६
अब निखिल उप्रेतीले मैले सात तलाबाट हाम फालेको अझै दर्शक हेर्न रुचाउँछन् भन्ने मनोविज्ञानलाई परै राख्नुपर्छ । विराज भट्टले मलाई अझै दर्शकले १० जना गुन्डालाई किक हानेको मन पराउँछन् र दिलीप रायमाझीले मलाई अझै दर्शकले नाचेको हेर्न चाहन्छन् भन्ने मनोविज्ञान त्याग्नुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन १३, २०७६
केहि समय अघि मात्रै आफ्ना प्रेमी सार्वजनिक गरेकी अभिनेत्री आँचल शर्माले इन्गेजमेन्ट गरेकी छिन् । प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग सोमबार इन्गेजमेन्ट गरेकी आँचल यहि फागुनको अन्तिममा उदिपकी बेहुँली बन्ने छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ २, २०७६
विमानस्थलमा चेकिङका क्रममा महिला प्रहरीबाट दुव्र्यवहार भएको भन्दै गायिका आस्था राउतले आक्रोश ब्यक्त गरेकी छिन् । उनले आफुमाथि दुव्र्यवहार भएको आक्रोश सहितको भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । अहिले उनको उक्त भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भैरहेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ १, २०७६
उनले लेखेकी छिन् ‘एउटा साथी, एउटा संरक्षक, दु:ख बिसाउने काख सबै गुमाएको छु । हामी एक अर्काको खुशीमा खुशी हुन्थ्यौ अनि दु:खमा दुखी । मेरो सानो सानो सफलतामा खुशी हुनुहुने आमा, अनि मेरा अफ्ठ्याराहरुमा मेरो हौसाला हुनुहुने आमा...। पुरा पढ्नुहोस्
शिव परियारको घोषणा
साप्ताहिक संवाददाता , पुस १६, २०७६
नेपाली सुगम संगीतमा अब्बल गायकका रुपमा चिनिएको नाम हो– शिव परियार । उनका थुप्रै गीतहरु लोकप्रिय छन् । उनै गायक परियारले बिनापारिश्रमिक भजन गाउने घोषणा गरेका छन् । त्यस्ता गीत नितान्त सामाजिक सेवाको भावमा हुनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख हुने पनि बताएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , पुस १४, २०७६
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय अभिनेत्री मध्येमा पर्छिन – वर्षा शिवाकोटी । चलचित्र छायांकनका लागि ग्रीस पुगेकी वर्षाले ग्रीसको सेन्टोरिनीबाट इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा आफ्ना केही ‘बोल्ड तस्वीर’ सेयर गरेकी छन् । उनले शेयर गरेका तस्बिरमा सकारात्मक र नकारात्म दुबै कमेन्ट आएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
जिन्दगीले हिसाब बिगार्न सक्छ, सम्बन्ध कहिल्यै मर्दैन
साप्ताहिक संवाददाता , पुस १०, २०७६
बुधबारको साँझ लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकालको अप्रिय खबरले तरंगीत भयो । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेर निलम शाहसँगको १७ वर्षे सहयात्रामा पूर्णविराम लगाए । १७ वर्षअघि मनले जोडेको सम्बन्ध अन्तत: कागजी रुपमा टुङ्गियो । उनको सम्बन्ध विच्छेदको खबरले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तंरगीत बनेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
करिश्माको आक्रोश र चेतावनी
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर २६, २०७६
यो दश बर्षको विचमा म त खोई, आठ–दस वटा भन्दा बढी चलचित्रको नाम गन्न सक्दिन, जुन उत्कृष्ट थिए । जबकी रहेक बर्ष सयौं चलचित्र बन्छन् ।’ उनले, इतिहासलाई टेकेरनै सबै जना उभिएको भन्दै यसलाई नभुल्न चेतावनी समेत दिएकी छिन् । करिश्माले ति वक्ता को थिए भन्ने कुरा भने उल्लेख गरेकी छैनन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर ८, २०७६
देश तथा विदेशमा हुने अधिकांश मेला महोत्सवमा अटाउने नाम हो– ज्योती मगर । गीत गाएर सांगीतिक क्षेत्रमा देखा परेकी ज्योतीले थुप्रै म्यूजिक भिडियोमा अभिनय समेत गरेकी छिन् । यो भन्दा बेग्लै उनको पहिरनलाई लिएर बारम्बार चर्चामा आईरहन्छिन् । त्यसो त उनले दिने विभिन्न खाले अभिव्यक्ति पनि बेला बेला चर्चाका कारण बन्ने गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , कार्तिक ३०, २०७६
अभिनेता अनमोल केसीले जिप कम्पास किनेका छन् । जिप कम्पास नेपाली बजारमा मात्र नभएर अन्य देशमा समेत निकै रुचाइएको गाडी हो । जिप कम्पास आफूलाई निकै मन परेको र त्यसैले यसलाई रोजेको अनमोलले बताएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्